एजेन्सी । अमेरिकी एक संघीय न्यायाधीशले भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमाथि ट्रम्प प्रशासनले लगाउन चाहेका प्रतिबन्धहरु हाललाई रोक्न आदेश दिएका छन् ।
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कार्याकालको लागि भएको निर्वाचन दौडमा पराजित भएपछि सन् २०२४ मा हुने निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धामा उत्रिनसक्ने सङ्केत गरेका छन् ।
एजेन्सी । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता बिल बारले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने रिपब्लीकन पार्टीको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
एजेन्सी । अमेरिकी राज्य पेन्सिल्भेनियाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका तर्फबाट दायर निर्वाचनसँग सम्बन्धित निवेदन शनिबार खारेज गरिदिएको छ ।
ट्रम्पलाई अर्को नमिठो झट्का, पेन्सिल्भेनिया राज्यको मतगणना उल्ट्याउने निवेदन खारेज
एजेन्सी । अमेरिकी राज्य पेन्सिल्भेनियामा मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको उजुरीलाई संघीय अदालतले शनिबार खारेज गरिदिएको छ ।
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका सुरक्षा प्रमुखलाई बर्खास्त गरेका छन् ।
ट्रम्पका अनुसार अमेरिकामा कहिले आउँदैछ कोरोनाको खोप ?
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२१ को अप्रिल महिनासम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बताएका छन् । उनले आगामी अप्रिल महिनासम्ममा कोरोना भाइरसको खोप सबै जना अमेरिकी नागरिकका लागि नै उपलब्ध हुने दाबी गरेकाे समाचारमा जनाइएको छ ।
ट्रम्पसँग डिभोर्स लिएमा मेलानियाले कति मुल्य बराबरको सम्पत्ति पाउनेछिन् ?
एजेन्सी । मेलानिया ट्रम्पले सम्बन्ध विच्छेदको तयारी गरेमा सुन्दर रकम प्राप्त गर्न सक्छिन् यदि उनी अमेरिकाको निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको (लेनदन) लाई समाप्त गर्ने छनौट गर्छिन्, एक वकिललाई मिररले भनेकी छन् ।